Akụkọ - AKWOCKWỌ AKWOCKWỌ AKW SKWỌ AKW NEWKWỌ AKW NEWKWỌ NEWLỌ ỌH ONR ON N'ONLỌ NCHE NA EGO
Na Nọvemba nke 6th, CNN Business weputara edemede nke Nathaniel Meyersohn dere nke isiokwu ya bụ "Gfọdụ ụlọ ahịa na-ebelata akwụkwọ mposi ma na-ewezuga ịzụrụ ihe nhichapụ." Mpempe akwụkwọ ahụ kwuru na ụfọdụ nnukwu ụlọ ahịa na mba ahụ amalitela itinye ego maka ịzụrụ ihe dịka akwụkwọ mposi, akwa nhicha akwụkwọ, na ikpochapu ihe nhichapụ iji gbochie ndị ahịa ịzụ ahịa.
Mgbe United States banyere ọnwa ọhụrụ nke ọnwa November na ndekọ ọhụrụ nke ọrịa COVID-19 (ikpe 121,054 na mba niile n'otu ụbọchị dị ka Mahadum Johns Hopkins si kwuo), ụlọ ahịa na-ere nri gbanwere ụfọdụ iwu atumatu e setịpụrụ n'oge ọnwa mbụ nke ọgbaghara. Ọtụtụ n’ime ụlọ ahịa ndị a bidoro ịmachi nzụta nke ụfọdụ ihe iji gbochie ndị mmadụ ịchekwa ngwaahịa ndị dị mkpa, na-enyekarị ihe karịrị ịzụrụ akwụkwọ mposi abụọ, akwa nhicha akwụkwọ, ọgwụ na-egbu nje na antibacterial, na ihe ndị ọzọ yiri ha.
Offọdụ n'ime ụdị ndị edepụtara n'isiokwu ahụ na-agbakwunye nrụgide ndị a na-enweta n'agbụ nke mba dị ka ihe dị mkpa na mkpebi ahụ. Nke a ga-adaba na data anakọtara site na ụlọ ọrụ nyocha ahịa ahịa IRI, nke gosipụtara ụba ịzụrụ ihe n'oge izu mbụ nke ọnwa Nọvemba, na 19% nke ngwaahịa akwụkwọ na 16% nke ngwaahịa nhicha ụlọ na-apụ na ngwaahịa.
N'agbanyeghị ọdịiche dị iche iche na-ekewa iwu dị iche iche, agbụ ahịa niile na-atụ anya ọchịchọ dị elu maka ngwaahịa dị mkpa site na njedebe nke afọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 60% nke ndị na-azụ ahịa na-ekwu na ha na-eme atụmatụ ịkwakọba ọzọ n'oge oyi na-abịanụ, yabụ ụdị ndị dị gburugburu mba ahụ na-akwado iji debe shelf ha nke ọma na-enweghị atụ egwu n'etiti ndị ahịa.